Taa na nri ehihie, ezutere m ndị ọrụ ibe ole na ole ị ga-atụle Mkparịta ụka gba ọtọ. Anyị nwere otu ìgwè dị egwu nke ndị mmadụ na-anọchite anya ọtụtụ ọrụ: iwu, mmekọrịta ọha na eze, telivishọn, telecomm, ịntanetị, ịre ahịa email, egwuregwu, ntụrụndụ, teknụzụ ozi, ahịa na mbipụta!
Ọ bụghị ihe ọjọọ maka ngosi izizi!
Ọtụtụ n’ime anyị agụchaala nke ọma Mkparịta ụka gba ọtọ, ụfọdụ bụ akụkụ ya site na ya, ma ole na ole ejirila ụfọdụ ihe sitere n'akwụkwọ ahụ mee ihe. Ndị ọrụ ibe m nwere ike ịnwe ike ịpị ma ọ bụrụ na ha chọrọ, mana nke a bụ echiche m banyere nri ehihie, nzaghachi na akwụkwọ ahụ, yana ịde blọgụ n'ozuzu:
Gingde blọgụ nwere ike ọ gaghị abụ maka ụlọ ọrụ niile. Y’oburu n’itugaghi uzo ozo, inwere ike imebi ulo oru gi ihe kariri nke oma.
Gị ahịa na-aga nwere mkparịta ụka na ma ọ bụ na-enweghị gị. Gịnị ma ị gbalịa ịchịkwa nduzi nke mkparịta ụka ahụ site na ịbụ onye mbụ ị ga-ede banyere ya. Nzukọ ozi na-echere ndị ahịa gị ịjụ. Blọọgụ bụ ohere gị ịza ajụjụ tupu ajụọ gị.
Amụma ịde blọgụ abaghị uru. Mgbe ndị ọrụ na-ede blọgụ, ịgbakwunye post na-ekwesịghị ekwesị adịghị njọ karịa ịsị ya na email, ma ọ bụ ekwentị, ma ọ bụ na mkparịta ụka. Ndị ọrụ na-aza ajụjụ maka ihe ha kwuru site na usoro ọ bụla. Ọ bụrụ na ị bụ blogger… mgbe ị na-enwe obi abụọ, jụọ! (Ihe nlere: Ajughi m ikike site na otu a ma oburu na m nwere ike idenye aha ha, ulo oru ha, ihe ndi ozo, ya mere m agaghi ebe a)
Ihe ndi ozo bu nchegbu na isiokwu nke mkparita uka. Ebee ka oge? Gịnị bụ atụmatụ ahụ? Gịnị bụ ozi ahụ?
Ọ dị mfe ịde blọgụ, mana ị ga-amụta etu ị ga - esi nweta teknụzụ dị na blog gị… RSS, njikọta, trackbacks, pings, kwuru, wdg.
Ọ bụrụ na etinye blọgụ dị ka atụmatụ, gịnị bụ nloghachi na itinye ego na ya? Nke a bụ mkparịta ụka siri ike. Echere m na izugbe otutu mmadu kwenyere bụ na ọ bụ agaghịkwa otu nhọrọ ebe a nloghachi na ulo oru mbo kwesịrị-enyocha… ọ bụ ina na-atụ anya n'aka gị ahịa imeghe ndị a edoghi nke nkwurịta okwu. Ma ọ bụghị ya, ha ga-aga ebe ọzọ!
Y’oburu n’inwe azuma ahia, ahia ma obu teknụzụ na mpaghara Indianapolis ma choo isonyere anyi maka klọb Akwụkwọ anyị, denye aha na M Họrọ Indy! ma nyefee akụkọ gị na ihe kpatara ị jiri họrọ Indianapolis. Anyị ga-etinye gị na email nkesa anyị aha nke akwụkwọ na-esote anyị ga-agụ na mgbe anyị ga-agbaso ya.
N'elu ederede, Shel Israel mere njem nke na-elekọta ndị nlekọta a kagburu wee mepee ịme ụfọdụ ndụmọdụ. Ka ọ na-etinye ya, Aga m achọ maka ego mgbarakwa ụlọ. Special ekele Mr. Israel maka akwụkwọ ya na-akpali nnọọ ole na ole folks ebe a na Indianapolis igwu n'ime ohere a maka onwe anyị na ndị ahịa anyị. Wegwọ anyị ga-efu karịa ụgwọ akwụkwọ ndị ahụ!
Special ekele Pat Coyle maka mmesapụ aka ya na ịhazi nzukọ anyị mbụ yana Myra maka ịhazi ọgbakọ anyị ma nye nri ehihie magburu onwe ya!
PS: Ọzọkwa ekele nwa m nwanyị, anyị abịaghị n'oge ndebanye aha na klaasị. Ekele dịrị m onye were m n’ọrụ, onye gbubiri m ụra n’ehihie!
Tags: Chebe Israel
Ọgọstụ 14, 2006 na 10:02 ehihie
Doug, ị ka mma lezie anya Shel Israel ga-arịọ gị ndụmọdụ!
Ọgọstụ 14, 2006 na 11:53 ehihie
Daalụ maka ma okwu ọma na plọg ọrụ aka, Doug. Ọ dị ka nnukwu ụlọ akwụkwọ na ọ na-atụ egwu ịhụ ka a na-atụle ma jiri ọtụtụ isi ihe dị n'akwụkwọ ahụ.